ပင်မနေရာ သွေးစကား ကိုယ်တွေ့
မန္တလေးမြို့ မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားဝင်း အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားမှု အမှတ်တရ - အပိုင်း (၂)	Friday, 01 February 2013 00:00	သွေးစကား	- ကိုယ်တွေ့	မစိုးရိမ်တိုက်ဟောင်းအတွင်း တရား ဟောပြောမှုအား အားပေး နားထောင်နေတဲ့ မန္တလေးမြို့ သံဃာတော် ပြည်သူလူထူများ
Read more...	မန္တလေးမြို့ မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားဝင်း အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားမှု အမှတ်တရ - အပိုင်း (၁)	Tuesday, 29 January 2013 00:00	သွေးစကား	- ကိုယ်တွေ့	??????????? ?????????????????? ????????????
Read more...	စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်စဉ် Thursday, 27 September 2012 00:00	သွေးစကား	- ကိုယ်တွေ့	User Rating: / 12
PoorBest ???????? ?????????? ???????????
Last Updated ( Thursday, 27 September 2012 15:09 )
Read more...	ဘင်္ဂလီအရေးလား လူ့အခွင့်အရေးလား - အပိုင်း (၁၀)	Friday, 24 August 2012 19:11	သွေးစကား	- ကိုယ်တွေ့	User Rating: / 13
PoorBest လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် ကင်တားနားအား စစ်တွေလေဆိပ်တွင် တွေ့ရစဉ်
Last Updated ( Sunday, 26 August 2012 23:55 )
Read more...	ဘင်္ဂလီအရေးလား လူ့အခွင့်အရေးလား - အပိုင်း (၉)	Wednesday, 22 August 2012 17:54	သွေးစကား	- ကိုယ်တွေ့	User Rating: / 12
PoorBest ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး UNHCR အကူအညီဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်ခြမ်း နရပရ ဘင်္ဂလီ ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဘင်္ဂလီ ဒုက္ခသည်များ ဆန္ဒပြနေပုံ
Last Updated ( Saturday, 25 August 2012 00:50 )
Read more...	ဘင်္ဂလီအရေးလား လူ့အခွင့်အရေးလား - အပိုင်း (၈)	Friday, 17 August 2012 23:54	သွေးစကား	- ကိုယ်တွေ့	User Rating: / 9
PoorBest သမ္မတဦးသိန်းစိန် (ယာ) နှင့် ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်း (ဝဲ) (ဓါတ်ပုံ - VOA)
Last Updated ( Saturday, 25 August 2012 00:52 )
Read more...	ဘင်္ဂလီအရေးလား လူ့အခွင့်အရေးလား - အပိုင်း (၇)	Monday, 13 August 2012 21:13	သွေးစကား	- ကိုယ်တွေ့	User Rating: / 11
PoorBest ???????????????????? ????????? ??????????????????? ???????? (??????? - www.kicnews.org)
Last Updated ( Wednesday, 15 August 2012 22:34 )
Read more...	ဘင်္ဂလီအရေးလား လူ့အခွင့်အရေးလား - အပိုင်း (၆)	Friday, 10 August 2012 20:42	သွေးစကား	- ကိုယ်တွေ့	User Rating: / 10
PoorBest ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့ အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာများတွင် လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေသော မြန်မာစစ်သားများ (ဓါတ်ပုံ - VOA)
Last Updated ( Wednesday, 15 August 2012 22:37 )
Read more...	ဘင်္ဂလီအရေးလား လူ့အခွင့်အရေးလား - အပိုင်း (၅)	Wednesday, 08 August 2012 18:13	သွေးစကား	- ကိုယ်တွေ့	User Rating: / 9
PoorBest ထိုင်းနိုင်ငံ ရေပိုင်နက်အတွင်း ရောက်လာတဲ့ဘင်္ဂလီတွေကို ရေစပ်မှာမှောက်ခိုင်းထားပြီး စိစစ်နေပုံ
Last Updated ( Wednesday, 15 August 2012 22:40 )
Read more...	ဘင်္ဂလီအရေးလား လူ့အခွင့်အရေးလား - အပိုင်း (၄)	Tuesday, 07 August 2012 15:19	သွေးစကား	- ကိုယ်တွေ့	User Rating: / 12
PoorBest စစ်တကောင်းတောင်တန်းနယ်က ရခိုင်မျိုးနွယ်စုနဲ့ တောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အိမ်များ မီးရှို့ခံရစဉ် Last Updated ( Wednesday, 15 August 2012 22:43 )
အရေးမထင် အပြစ်မမြင် အာဏာရှင်များ - အပိုင်း (၂)
စစ်သားများကို မုန်းသည်ဆိုသော စစ်သားတစ်ယောက်ရဲ့သမီး - အပိုင်း (၂)
အရေးမထင် အပြစ်မမြင် အာဏာရှင်များ - အပိုင်း (၁)
စစ်သားများကို မုန်းသည်ဆိုသော စစ်သားတစ်ယောက်ရဲ့သမီး - အပိုင်း (၁)
ရွာပုန်းပြီးရင် မြို့ပုန်းတဲ့ဟေ့ - အပိုင်း (၂)
တမ်းတမိသည် ဟိုအတိတ်ဆီ - အပိုင်း (၂)
တမ်းတမိသည် ဟိုအတိတ်ဆီ - အပိုင်း (၁)
စစ်သည်တွေနဲ့ အကြွေးရှင်များ - အပိုင်း (၁)
နေရာ - အပိုင်း (၄) နေရာ - အပိုင်း (၃)
နေရာ - အပိုင်း (၂) နေရာ - အပိုင်း (၁)
« Start Prev 123456Next End »	Page 1 of 6	နောက်ဆုံးရသတင်းများ